सिल्वर एयरवेजले एंगुइलाको सेवा जून २, २०२१ मा सुरू गर्दछ
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार » ए Ang्गुइला ब्रेकि News न्युज » सिल्वर एयरवेजले एंगुइलाको सेवा जून २, २०२१ मा सुरू गर्दछ
एयरलाइन्स • हवाई अड्डा • ए Ang्गुइला ब्रेकि News न्युज • उड्डयन • ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • क्यारिबियन • सरकारी समाचार • अतिथि सत्कार उद्योग • निवेश • समाचार • पोर्टो रिको ब्रेकिंग न्यूज • पुनर्निर्माण • पर्यटन • पर्यटन कुराकानी • यातायात • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा रहस्य • विभिन्न समाचार
एंगुइला टुरिस्ट बोर्डले यो घोषणा गर्न पाउँदा खुसी छ कि रजत एयरवेले सान जुआनबाट एilla्गुइला सम्मको सेवा शुक्रबार, जून २, २०२१ मा शुरू गर्नेछ।
गर्मीका लागि उडान हप्तामा २ पटक स्यान जुआन, पोर्टो रिको र ए Ang्गुइला बीच चल्नेछ।
एu्गुइला टुरिस्ट बोर्डले टापुमा सरोकारवालाहरू र हवाई सेवालाई प्रबर्धन गर्न मार्केट इन ट्राभल एड्भाइजरहरूसँग साझेदारी गर्नेछ।
यी उडानहरू पुनःसुरु गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय यात्राको लागि एu्गुइला पुनः खोल्ने महत्वपूर्ण चरण हो।
ग्रीष्म उडानहरू August अगस्ट, २०२१ सम्म सैन जुआन, प्युर्टो रिकोको लुइस मुओज मारिन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र ए Ang्गिलामाको क्लेटन जे। लोयड अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको बीच साप्ताहिक दुई पटक सञ्चालन हुनेछ। सिल्वर एयरवेज सीबोर्न एयरलाइन्सको मूल कम्पनी हो। समुबर्न धेरै वर्षदेखि ए Ang्गुइलामा सञ्चालित छ।
“म २०१ 2014 मा सिबोर्न एयरलाइन्ससँग शुरुवातमा गरिएको वार्ताको हिस्सा भएकोमा गर्व गर्दछु जुन ए Ang्गुइलाको नियमित सेवामा परिणत भयो। हामी महामारीको कारणले लामो लामो अन्तराल पछि ए Ang्गुइलामा सिल्वर एयरवेलाई स्वागत गर्न पाउँदा खुसी छौं। माननीय भने। पर्यटन मन्त्री, श्री हेडन ह्युजेस। “चाँदी / Seaborne धेरै वर्ष को लागि हाम्रो मूल्यवान साथी हो, र स्यान जुआन प्रवेशद्वार हाम्रो उद्योग को विकासको लागि महत्त्वपूर्ण छ।. पर्यटन विकासका लागि एu्गुलामा पहुँच कायम गर्नु र विस्तार गर्नु आवश्यक छ, र यस सेवाको पुनर्स्थापना एउटा महत्त्वपूर्ण चरण हो जुन हामीले आफ्नो टापुलाई फेरि अन्तर्राष्ट्रिय यात्रीहरूको लागि खोल्छौं, " उनले जारी राखे।
"हामी एंगुइला सेवा गर्न सम्मानित छौं, जुन लामो समयदेखि हाम्रा सबैभन्दा लोकप्रिय मार्गहरू मध्ये एक हो, " कप्तान स्टीवन दौडा, सिल्वर एयरवेज र समुद्री एयरलाइन्सका लागि क्यारेबियन अपरेशनका उपाध्यक्ष घोषित भए. "एu्गुइलाको पर्यटन उत्पादन असाधारण हो, र एu्गुइलासँगको हाम्रो सम्बन्ध कडा र पारस्परिक रूपमा लाभदायक छ। हामी यहाँको पर्यटन साझेदारहरूसँग मिलेर टापुमा आगन्तुकहरू बढाउन र यस जाडोमा सेवा बढाउनको लागि तत्पर छौं। ”
रजत एयरवेज सेवा हप्तामा दुई पटक काम गर्दछ, बिहीबार र शनिबार, हरेक दिनमा दुईवटा घुमाइहरू प्रति हप्ता चार उडानहरूको लागि।